Iqoqo - Izibuko zelanga - THE INDIAN FACE
Iqoqo - Izibuko zelanga
Free Spirit Mnyama / Burgundy
Polar Izinkuni / Luhlaza
Oxygen I-Edition Blue Tortoise / Ukukhanya Okubomvu
UFudu Oluhlaza OlunguBondi
I-Ventura Imnyama / Bomvu okukhanyayo
Barrel I-Tortoise / Bomvu
Free Spirit Okumnyama / Okubomvu okukhanyayo
Free Spirit Okumnyama / Okuhlaza
Oxygen I-Edition Blue Tortoise / Bomvu
Free Spirit Luhlaza / Mnyama
Oxygen Edition Blue Tortoise / Mnyama
Kailani I-Green Tortoise
Tarifa I-Tortoise / brown
Barrel Mpunga / Luhlaza
Free Spirit Okumpunga / iBurgundy
I-Freeride Emnyama / Emnyama
Tarifa Luhlaza / Mnyama
Free Spirit Blue Tortoise / Mnyama
Oxygen I-Edition Grey / Light Red
Ukuqubuka Okumnyama / Okumnyama
UFreeride Wood / uBrown
Free Spirit Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
UVentura Brown / Mnyama
Polar Ufudu / Luhlaza
AMA-SUNGLASSES AMADODA NABESIFAZANE
ukuguquguquka okuphelele futhi ubenze bafaneleke noma yisiphi isikhathi sosuku nezimo zezulu. Sinikeza anhlobonhlobo izibuko polarukuphakanyiswa (ikakhulukazi) ukuya ezintabeni, ukuya olwandle, ukushibilika eqhweni, ukudlala imidlalo ngaphandle noma ukumane uthwale bheka emadolobheni amaningi. Isitayela sayo se-avant-garde silungele ukuhlanganiswa nanoma yiluphi uhlobo lwe- izingubo kwabesilisa nabesifazane.
Yini izibuko zelanga polarkuphakanyisiwe? Ngabe ama-lens asebenza kanjani polaruthukile?
Ziyizibuko zamehlo ezinamalensi awo polarkuphakanyisiwe. Yena polarokuphakanyisiwe kuyisihlungi vertical evimba imisebe yokukhanya evela elangeni efinyelela emehlweni ethu ngokuvundlile, ngokwesibonelo, lapho imisebe yelanga ibonakala eqhweni, emanzini olwandle noma e-asphalt. Inzuzo enkulu yezibuko zelanga polaruphakanyisiwe ukwenza umbono wakho ujabulise futhi ukhululeke.
Izibuko polarUkuphakanyiswa kuzohlala kuyindlela enhle kunazo zonke, futhi kubalulekile ukuthi uzithenge ziqinisekiswe yi-EU kanye nokuvikelwa kwe-UV 400. Noma yiziphi ezinye izibuko zelanga polarUkuphakanyiswa ngeke kulunge ukukuvikela elangeni. Uma ufuna ukugqoka izibuko zelanga ezihamba phambili, cabanga ukuthi iziphi ezizokufanela kangcono, izibuko zelanga eziyisikwele, noma izibuko zelanga eziyindilinga. Okwesithathu, cabanga ngomsebenzi ozowenza, uma kungaphakathi noma ngaphandle, uma kusemini noma ebusuku, uma kusehlobo noma ebusika; zonke lezi zinto zinomthelela esinqumweni sakho lapho uthenga izibuko zelanga polaranyakaze.
Kungani senza izibuko zelanga Polarized Umuntu nezibuko zelanga Polarized Woman? Yiziphi izinzuzo abanazo?
Inzuzo enkulu yezibuko zelanga polarkuphakanyisiwe ukuthi banikeza umbono ngaphandle kokucabanga. Okungenani ukukhanya okuvundlile okuvame kakhulu, njengoba siphawule.
Izibuko zelanga nge polariphakanyisiwe inikezela ubukhali obukhulu kanye nezinga eliphakeme lokuqhathanisa.
Zinciphisa i-eyestrain kanye ne-eyestrain, ngokunikeza umbala wemvelo kanye ne-primal.
Isihlungi sezibuko zelanga polarized ingahlanganiswa nezinye izihlungi ezibalulekile, njengezihlungi zokukhanya ezibonakalayo nesihlungi se-UV, esidingwa ngumthetho, ngendlela yokuthi sinikeze ukuvikelwa okuphelele.
Ngendlela efanayo, sikutshela kafushane ezinye izici zobuchwepheshe bezingilazi zethu zelanga polarized engaba nentshisekelo kuwe:
Uhlaka lokukhanya lwe-Ultra olwenziwe nge-PC noma nge-polycarbonate. I-polycarbonate esiyisebenzisa ezibukweni zethu zelanga polarUkuphakanyiswa kungokwekhwalithi engcono kakhulu ekhona emakethe, ayizweli, ilula kakhulu futhi inethezekile.
Amafreyimu ethu amaningi atholakala esitolo sethu sezibuko zaku-inthanethi sinamahinji ayi-5-tit titanium okuqina okukhulu ekusebenzeni okuphezulu. Izibuko zelanga zingavulwa futhi zivaliwe izikhathi eziyizinkulungwane, ngakho-ke kubalulekile ukuba namahabhinisi ekhwalithi ephezulu kakhulu akwazi ukumelana nokuhamba kwesikhathi.
Lapho ingxenye yezobuchwepheshe yezingilazi zamadoda ethu kanye nezibuko zelanga zabesifazane sekuchaziwe, sizozama ukuchaza ukuthi yini ebangela ukwakhiwa kweqoqo lethu lakamuva. Ingabe senza izibuko zelanga ezithandwayo, izibuko zelanga eziyisikwele, izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zelanga zemfashini?
En The Indian Face besilokhu sikhathazeke kakhulu ngobuhle. Yebo, ubuhle. Siyakuqonda ukuthi impilo ingacindezelwa kumasekhondi ngamunye futhi lokho, kusho, futhi kucindezela wonke umzuzu wobuhle esisondelene nawo, noma ngabe sicabanga ngokugqoka izibuko zethu zelanga polaruphakanyisiwe waya ensimini, ukujabulela ukuhamba ngezintaba, ukugeza ebhishi, ukugcwalisa a izingubo ukhonkolo, umsubathi o Okuvamile, ngakho-ke phakathi kwekhathalogi yethu yezibuko zelanga uzothola izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zelanga eziyisikwele nazo zonke izinhlobo zezingilazi zesimanje nezibuko zelanga ezifashisayo.
Ithimba lethu lokuklama licabanga lo mbono bese liwusebenzisa, lizuze izibuko zelanga ezihamba phambili polarIziphakamisi ezingaba khona zawo wonke umzuzu nendawo. Ngakho-ke, sinamamodeli wezibuko zelanga polarZidlala kakhulu njengezinye izinhlobo zezingilazi zemfashini noma izibuko zelanga zanamuhla, zihlala zingamamodeli we-unisex, singasho ukuthi zakhiwe ngephuzu elilodwa lezingilazi zabesifazane. Njengamaqoqo wangaphambilini, siyaqhubeka ukuba nezibuko zethu zelanga zakudala, izibuko zelanga eziyisikwele, kanye okwakudala okuhambisane nomkhiqizo wethu kusukela ekudalweni kwawo eminyakeni engaphezu kwengu-15 edlule. Ekugcineni, kuleli qoqo nakwamanye angaphambilini, sinaka futhi izinhlobo zezingilazi eziyindilinga ozifuna kakhulu kithi unyaka nonyaka.
Zonke lezi zinhlobonhlobo zamamodeli ziphendula ngenhloso eyodwa, yokuthi ungathola imodeli evumelana kangcono nesidingo sakho esithile ngaso sonke isikhathi. Casual, okungahambisani nedolobha, umsubathi, ezemidlalo izingubo, izibuko zethu zelanga polarIzintambo zisebenza ngokufanele zonke izinhlobo zobuhle.
Ngabe sinokunikezwa kwezibuko zelanga nezibuko zelanga?
Okokugcina, ku The Indian Face, ngezikhathi ezithile, sinikela ngezibuko ezibukekayo zezinhlobo ezintsha nezindala, ngakho-ke, noma ngabe ufuna ukuthenga izibuko zelanga polarkuphakanyisiwe, sengathi ufuna ukunika izibuko zelanga polarized, ungakhohlwa ukulalela izindaba zesitolo sethu sesibuko esiku-inthanethi, unake kakhulu indawo yethu yezibuko zelanga, futhi, bhalisela incwadi yethu yezindaba ukuthola okunikezwayo ngezibuko zethu zelanga.
Esitolo esidayisa izibuko zethu uzothola amadili wezibuko ahamba phambili emakethe, noma ngabe ufuna ukuthenga izibuko zelanga polarkuphakanyisiwe, sengathi ufuna ukunika izibuko zelanga polaranyakaze. The Indian Face njalo inani lakho elihle kakhulu lemali. Yebo, okuhamba phambili futhi sithi siyaziqhenya, siyaziqhenya ngomsebenzi esiwenzayo, umsebenzi owenziwa yilowo nalowo wabantu abakha iqembu lobuchwepheshe nokwakha ukukunikeza okunikezwayo okuhle kakhulu futhi okuhlukahlukene kakhulu emakethe. Uma ufuna ukuthenga izibuko zelanga, uma ufuna isitolo sezibuko zaku-inthanethi, uma ufuna isitolo sezibuko zelanga, noma ngabe ufuna ukuthenga izibuko zelanga polaryaphakamisa noma yanikeza izibuko zelanga polarized, noma ngabe ufuna izibuko zelanga eziyindilinga, izibuko zelanga eziyizikwele, izibuko zelanga zemfashini, izibuko zelanga zanamuhla, singumkhiqizo wakho oyinkomba.
Namuhla, ku The Indian Face sinikeza ukuqoqwa okumangazayo kwezibuko zelanga ezizungezile, izibuko zelanga eziyisikwele, izibuko zelanga zanamuhla, izibuko zelanga zemfashini ... ngamafuphi
Izibuko zelanga ezinhle kakhulu zazo zonke izinhlobo nezitayela! Ingabe usuvele uthengile esitolo sethu sezibuko zaku-inthanethi? Uma ungakakwenzi lokho kuze kube manje, sikumema ukuthi ubheke amaqoqo ethu ezibuko zelanga polarManje vakashela i-outlet yethu yezibuko zelanga, ukuze ukwazi ukukhetha ozithanda kakhulu futhi uvumelane nempilo yakho. Njengoba ukwazi ukubona, singabathandi bezemidlalo, isenzo nemfashini. Lokhu kubonakala kahle esitolo sethu sezibuko zelanga.
Ungazibonela ngokuvakashela zonke izingxenye zesitolo sethu sezibuko! Siqinisekisa ukuthi uzothatheka yizinhlobonhlobo zezibuko zelanga polarHoists sethula minyaka yonke, eyenzelwe ezemidlalo, eyenzelwe ukuzijabulisa. Sebenzisa ngokunenzuzo ukuthenga izibuko zelanga ngeminikelo yethu polarIzimpahla zemidlalo nezinsiza, ezihlala zisezingeni, futhi njalo kwezemfashini Zilungiselele ukuzidela okuhle futhi ugqoke omunye wemikhiqizo yezibuko zelanga ezihamba phambili laphaya!
Uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthenga izibuko zelanga?
Izibuko zelanga zingenye yezesekeli ezisetshenziswa kakhulu emhlabeni. Abanawo umehluko weminyaka noma ubulili, futhi banconywa kakhulu ngodokotela abangochwepheshe, ezinsukwini ezishisayo kakhulu, njengasebusika nangezinsuku ezinamafu ngaphandle kokuhlukanisa. Futhi, gqoka izibuko zelanga polarized isibe yingxenye ebalulekile yengubo ekahle kwabaningi, kangangoba, namuhla, izibuko zelanga ezihamba phambili yilezo ezifeza le misebenzi emibili: imfashini nokuvikelwa.
Ochwepheshe abaningi banombono wokuthi izinhlobo ezahlukahlukene zezibuko zelanga zenzela umphakathi umsebenzi oncomekayo ngokunikeza ukukhetha okuningi nokuhlukahluka ngenkathi zifundisa ngokubaluleka kokugqoka izibuko zelanga. polarYaphakanyiswa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, hhayi ehlobo kuphela. Izibuko zelanga ezihamba phambili zingatholwa ezitolo zomzimba nakwezokukhanya, futhi, ngamadijithali, ku-inthanethi, ngamanani ajwayelekile noma ngehliswe nasezitolo ezahlukahlukene zelanga.
En The Indian Face siphenduke ngokweqile ngezibuko zelanga polarkuphakanyisiwe, ikakhulukazi kusuka kwizibuko zelanga zemidlalo kanye nezibuko zelanga zemfashini, inhloso yethu ukunikela ngezibuko zelanga ezinhle kakhulu ngentengo enhle. Kulo nyaka odlule sizinikele ekuhloleni ozimele abasha okuholele ekwakhiweni okuthakazelisa kakhulu kwezingilazi eziyindilinga nezibuko zelanga eziyisikwele. Lokhu kubeke uphawu lomkhiqizo kahle kakhulu emncintiswaneni wethu. Ngale ndlela, ochwepheshe abaningi kanye nomagazini bayasifaka phakathi kwezibuko zelanga ezihamba phambili eSpain namuhla, ikakhulukazi emikhakheni yezemidlalo kanye nemidlalo ejwayelekile, nokuyinto esikhethekile kuyo.
En The Indian Face sigqame ngokunikela ngemfashini, ukuvikela kanye nesitayela semidlalo. Izibuko zethu zelanga zikhuthazwe ifilosofi yethu yomkhiqizo. Asisona nje isibuko sezibuko zaku-inthanethi, singabahloli bezinto abakha izesekeli zezemidlalo zabanye abahloli bezinto ezithile, zeminye imimoya yamahhala, ezimisele ukuhamba nawe kulolonke uhlobo lwemidlalo olwenzayo.
Uzothola isitolo sethu sezibuko zelanga sitholakale ku-inthanethi, futhi ngaphandle kokungabaza, siyakutshela, ngaphandle kokwesaba ukuthi uzophutha, ukuthi kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuthenga izibuko zelanga namuhla. Njengamanje, sisebenzisana nenqwaba yabasubathi abashiseka ngokweqile ngezibuko zelanga zesimanje njengathi. Njengomkhiqizo wezibuko zelanga, izibuko zelanga polarama-hoist nezesekeli zemidlalo ebesineminyaka engaphezu kwengu-15, The Indian Face iyaziqhenya ngokwethula ngezikhathi ezithile iqoqo elibanzi lezingilazi zelanga ezihambelana nemizi nemvelo. Kuvame ukucatshangwa ukuthi izibuko zelanga ezihamba phambili azikho, kepha sikholwa ngenye indlela. Esitolo sethu sezibuko zasemoyeni nakwe-outlet yakho ngokungangabazeki uzothola izinketho ze-uninsex ezizokushiya umangele futhi zikhiqize kuwe umuzwa ongenakuphikiswa wokuphuma uyozilolonga kwezemidlalo futhi uhlole umhlaba uyofuna ukuzidela okusha.
Eqinisweni ku The Indian Face Leyo yinhloso yethu enkulu, ukuncintisana ngempela neminye imikhiqizo yezibuko zelanga, nokunikela ngekhwalithi engcono kakhulu emakethe. Izibuko zethu zelanga ezithandwayo empeleni azipheli isitayela, ngoba zenzelwe ukuhlala iminyaka neminyaka. Akukhathalekile ukuthi uthanda izibuko zelanga eziyindilinga ngaphezulu noma izibuko zelanga eziyisikwele noma izibuko zelanga zanamuhla, esitolo sethu sezibuko ngokungangabazeki uzothola inketho ekahle yakho noma njengesipho. Lesi sakamuva yiso kanye esingathanda ukukugcizelela, njengamanje, izibuko zelanga polarized kuyindlela enhle kakhulu yesipho sabathandekayo bethu kungakhathalekile ukuthi bangabathandi bezibuko zelanga ezifashisayo ngoba zihlala ziyizinsiza ezisebenza kahle sonke esithanda ukuzithola.
Ayikho imithetho, ayikho imikhawulo. Umoya nje wamaNdiya